ရဲနိုင်ဦး – The Voice Journal
“ခွင့်ပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း စဉ်းစားစရာတွေ ရှိမှာပေါ့လေ”
ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရန် ရှမ်းနှင့် ရခိုင်သာကျန်ရှိတော့သည် ဖြစ်သည်။ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်အနက် ရှမ်းလူမျိုးများအတွက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ လုပ်ဆောင်ရန်မှာ နေရာသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ရခိုင်လူမျိုးများအတွက်မူကား...
Interviews / lotaya / Politics
“အခု ဝန်ထမ်းတွေ ပါတီနိုင်ငံရေး မလုပ်ရဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ပြင်ချင်တဲ့သူတွေက မိမိပါတီအာဏာရမယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆသူတွေက ပြင်ချင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”
ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အငြိမ်းစား ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်သိန်းညွန့် (သိန်းထက်အောင်) နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း The Voice Journal – နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေ ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ပယ်ဖျက်မည်ဆိုရင် သင့်လျော်၏၊ မသင့်လျော်၏ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျ။...
Articles / Business / lotaya / Politics / Special Reports
NLD အစိုးရသည် ရွေးကောက်ပွဲများမှတစ်ဆင့် ပြည်သူက တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရဖြစ်သောကြောင့် တရားဝင်မှုအရ နိုင်ငံတကာတွင် မျက်နှာငယ်ရရိုး မရှိ။ အခြားသော နိုင်ငံများရှိ ရွေးကောက်ပွဲမှတစ်ဆင့် ဖြစ်တည်လာသော အစိုးရများနည်းတူ တန်းတူရည်တူ ဆက်ဆံန်ိုင်သည့် အစိုးရဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သောင်ပြို...
ပန်းမဝင်မီ ခွဲနှင့်သည် (အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အားစမ်းခန်း)
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီ (၄၅ ဦးကော်မတီ) သည် မဖွဲ့မီကပင် ကန့်ကွက်မှုများ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဖွဲ့စည်းပြီး အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်မည်ဆိုသောအခါတွင်လည်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်သူများ ရှိလာသည်။ ဩဂုတ်လ ၂ ရက်တွင် မအူပင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်ဝင်း၊ ဩဂုတ်လ...
Business & Economy / Interviews / lotaya
“တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းက တစ်ကြောင်းတစ်ဂါထာ၊ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်းသလို ဖြစ်နေတယ်”
မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမြင့်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း NLD အစိုးရလက်ထက် ဝန်ကြီးအချို့ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် တင်ဒါကိစ္စလည်းပါဝင်သည်။ လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်ဝက်တွင်လည်း ဝန်ကြီးဌာနများသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကောင်းစွာမပြနိုင်ခဲ့။ ၅၁ ရာခ်ိုင်နှုန်းမှာ လုပ်ငန်းပင်...
“အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ အောင်မြင်နိုင်မယ့် အလားအလာမရှိပါဘူး”
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဦးရဲထွန်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်အတွင်း ကြိုးပမ်းမှုသည် ယခုအခါ အများက စောင့်ကြည့်မှုခံနေရပြီဖြစ်သည်။ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကမူ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် အဓိကကျသော တပ်မတော်က မည်သည့်အကြံဉာဏ်မှ ပေးပို့ခြင်းမရှိဟု ဆိုသည်။ ထိုပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းသည်ကိုပင် တပ်မတော်က ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအခါ...
“ဘယ်လိုအမျိုးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းတိုင်းက ကြန့်ကြာတယ်”
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ယဉ်မင်းလှိုင်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာအရဆိုလျှင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ်ဂျက် ပထမခြောက်လတာကာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက လုံးဝအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးသည့် လုပ်ငန်းမှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသည်။ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းများနှင့်စီမံကိန်းကို ကောင်းစွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပွင့်လင်းရာသီ တစ်ဆက်တည်း ရှစ်လဖြစ်စေရန် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို...
“အစိုးရရဲ့ အပြောင်းအလဲက သိပ်ပြီးတော့ ထင်သလောက်မအောင်မြင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်”
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်ဝင်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘတ်ဂျက် ပထမခြောက်လတာကာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးက လုံးဝအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးသည့် လုပ်ငန်းမှာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိသည်ဟု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီအစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ လုပ်ငန်းများနှင့် စီမံကိန်းကို...
Business & Economy / Interviews / lotaya / Politic
Biz Law Consult Myanmar တည်ထောင်သူ ဦးမင်းတေဇညွန့်တင်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း
“မူပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုခြုံပြီး စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒူးရင်းသီးလိုပဲ မြင်ရမယ်။ ဆူးလည်းရှိသလို အရသာလည်း ရှိမယ်” Myanmar Book Centre က ၎င်းတို့ကိုယ်စားလှယ်ရယူထားသည့် စာအုပ်တိုက်များမှ စာအုပ်များကို ပြန်လည်ကူးယူရောင်းချနေမှုများအပေါ် ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း မေလ ၂၄ ရက်တွင်...
လျှပ်စစ်မီးမရရှိမှုသည် နွေအပူကိုအံတုရန် အဲကွန်းမဖွင့်နိုင်ရုံသာမက လုပ်ငန်းရှင်တို့၏ ရင်ထဲသို့ သောကမီးကိုပါ ထပ်မွှေးလျက်ရှိနေသည်။ ဧပြီလနှင့် မေလအတွင်း လျှပ်စစ်မီးပြတ်မှုသည် စိပ်လာလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးသည်ပင် လွှတ်တော်တွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဖြေရှင်းရသည့် အဆင့်ရောက်လာခဲ့သည်။ မည်သို့ဆိုစေ...